Chikunguru 24, 2018 arun
Binance vagadzirira kupinda pamusika South Korean
Binance, nyika guru cryptocurrency Exchange, iri vagadzirira kupinda South Korea. Binance ari kuronga kutanga makambani emo matatu namashanu gore rino maererano nhau mabviro BusinessKorea. Binance CEO Changpeng Zhao vakapinda Blockchain Partners Summit muSeoul musi July wa21 & 22nd it. Panguva kutaura kwake Hurukuro inokosha, akasimbisa kukosha pamusika South Korea, vachiti kambani yake kuti kuvandudza nharaunda yayo mumusika.
Binance achangobva akawedzera Korean basa mutauro wayo cryptocurrency Exchange uye pamutemo Website, uye vakaripira vokuKorea kuti yokutengesa mutungamiriri omunharaunda uye Binance Labdirector, inova pasocial rova ​​mari. Zvinoshamisa, Binance yatova Exchange sarudzo vamwe vatengesi South Korean.
Bittrex inopa crypto kuti Fiat kutengesa kuti rukasimbiswa nhoroondo
Bittrex, US yakavakirwa crypto-Exchange kuti pari rinopindura $150 miriyoni wokuita zvemusika Mavhoriyamu, atanga kupa USD deposits uye withdrawals uyewo kutengesa vaviri vaviri. Bittrex inoti: "Bittrex zvino anotsigira kodzera pachavo uye ezvokutengeserana munhoroondo kuti US Dollar (USD) wokutengesera, USD deposits, uye USD withdrawals. vatengi International uye avo uchishanda California, New York, Montana, uye Washington State pamwe nokuzivikanwa anopupurira nenhoroondo vakodzera. "
Kuti kuchinjanisa Fiat, vanhu vanofanira kukumbira mvumo, & tumai ID pamwe uchapupu kero. It zvakare chete mana chete inoti iri US, asi chinozikamwa chihombe kuchinjana chabva crypto-to-crypto zvokutengeserana zvino crypto-kuti Fiat. Vaimbova mukuru crypto Exchange kamwe, pezvinenge Poloniex, asi zvino Binance vakauya vakabata vose.
UK Central Bank itsva mubhadharo hurongwa kushandisa blockchain
The Bank of England yoku- kubhadhara maitiro achava inowirirana blockchain-kwakavakirwa dzemari Michina siyana. Ichi chikamu BoE kuti nokuramba zvichiedza modernize ayo Real-Time Gross Settlement hurongwa (RTGS), izvo kunokosha kuti rwezvemabhengi uye zvokutengeserana muBritain uye rinopindura kwema munokosha kumativi £ 500 bhiriyoni gore negore, kana kusvika chetatu munyika zvoupfumi goho.
The upgraded Hurongwa vanotarisirwa kuti yakatanga kufamba muna 2020, uye vachaitwa zvakagadzirirwa kuti husingakwanisi cyber-kurwisa ukuwo zvinowanikwa kuti vakwanise kuverenga mabhizimisi madiki. hurumende Britain ndiyo chaizvo kuti United Kingdom kuramba aitungamirira muzinda fintech utsanzi akafanana vachibhadhara uye blockchain, uye pari kuongorora kana revamped RTGS maitiro aigona kupa uye kushandisa "cryptographic uchapupu" kuti kurega Data vari chakabiwa kana akachinjwa.
Bitcoin kwakaita kutonga zvazvingava anorova chinyorwa marefu 2018 richisvika 46.5%
Maererano nemashoko CoinMarketCap, Bitcoin kwakaita kutonga achangobva yarova 46.5% mucherechedzo kokutanga kubva December 2017. Bitcoin kwakaita kutonga inomiririra mugove Bitcoin ari zvachose kumusika chivharo nokuda cryptocurrency. Zvakawanikwa Bitcoin kwakaita kutonga yave rakaenderana mutengo BTC raMwari kusvika yayo-mwedzi miviri kumusoro July 23rd ($7,820) uye sokuti kuratidza kuti Bitcoin chichiri “suo cryptocurrency” nokuti ruzhinji makambani: chete pashure vanotenga BTC anogona vanotanga diversifying kwavo crypto Holdings.
Zvinokosha kutaura kuti Bitcoin kwakaita kutonga hakurevi zvakakwana kumiririra mamiriro ari crypto musika kubva dzakawanda mari chaizvo kuonekwa zuva. Pasinei vakawanda mafashamo altcoins itsva, Bitcoin achiri vakabata nesimba kuti arşive, uye bullish uptick zvingaratidza BTC acharamba kuwedzera kwayo musika mugove.
Chinese guta rinotanga $ 1.5B blockchain Fund
Nanjing, guta guru Jiangsu dunhu, akaita anonzi yakatanga mubhizimisi Fund ukoshi 10 bhiriyoni Currencykuva kusimudzira blockchain zvemichina uye upfumi chiratidzo nezveBhaibheri. Nanjing musha mumwe munyika chikuru kure negungwa zviteshi. Alibaba, mumwe munyika chikuru zvemichina makambani, akasarudza Nanjing sezvo kumuzinda cryptocurrency bhizimisi rayo kuchera muna October 2017.
The Municipality wacho mari vakasikwa pachiimbwa hurumende masangano. Yuandao, Sachigaro ane munharaunda “Blockchain Alliance” akati kuti “mamwe maindasitiri nemafungiro blockchain Michina kunoreva kuti zvakawanda ichatevera sutu.”
Kraken Daily Market Mushumo 23.07.2018
$159M nhumbi mhiri misika zvose nhasi